बैंकिङ मुभमेन्ट – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराईले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । स्थापनाकालदेखि नै सेञ्चुरी बैंकमा कार्यरत भट्टराईले पिएचडी गर्ने भन्दै राजिनामा दिएको बताइएको छ । यद्यपि, सिईओसँगको विवादका कारण उनले बैंकले छोडेको बुझिएको छ । उनलाई सिईओलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिने र आफूखुसी बैंक चलाउने आरोप लाग्ने गरेको
मेरो माइक्रो फाइनान्समा रामहरि दाहाल पुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त
बैंकिङ खबर । मेरो माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको बिहिवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी ४ वर्षको कार्यकालका लागि रामहरि दाहाललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुन नियुक्ति गरेको छ । साथै सोही बैठकले संस्थामा कार्यरत निमित्त नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज दाहाललाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति गरेको छ । मेरो माइक्रोफाइनान्सको वार्षिक आम्दानी विवरण
प्राइम बैंकको निमित्त सीईओमा सन्जीव मानन्धर नियुक्त
बैंकिङ खबर । प्राइम कमर्सियल बैंकको निमित्त कार्यकारी अधिकृतमा सन्जीव मानन्धर नियुक्त भएका छन् । राष्ट्र बैंकले लगाएको उमेर हदका कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर पदमुक्त भएपछि सन्जीव मानन्धरलाई निमित्त सीईओको जिरुम्मेवारी दिइएको हो । उनी प्राइम बैंकमा जनरल मेनेजर थिए ।
चार डेपुटी सिईओ नियुक्त गर्दै सिटिजन्स बैंक
बैंकिङ खबर । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले चार विभागीय प्रमुख अधिकृतहरुलाई सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । बैंकका अनुसार, हालका कर्जा अधिकृत सुमित बाबु खत्री, प्रमुख संचालन अधिकृत पारस कुमार काफ्ले, प्रमुख जोखिम अधिकृत राजेन्द्र लाल श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमंग शर्मालाई सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । बैंकले आगामी
सनराइज बैंकका सीईओ पौड्यालको कार्यभार सुरु, बैंकिङ क्षेत्रमा ३२ बर्षभन्दा बढि अनुभव
बैंकिङ खबर । जनक शर्मा पौड्यालले औपचारिक रुपमा सनराइज बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यभार सुरु गरेका छन् । बैंक संचालक समितिको गत आसार २७ गते बसेको ३२० औँ बैठकको निर्णयानुसार बैंकको रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा श्री जनक शर्मा पौड्याललाई नियुक्त गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौड्यालले तत्कालिन नेपाल अरब बैंक लिमिटेड
अर्थमन्त्रीका ज्वाईँ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा
बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका छोरीज्वाईँ डा. रामशरण खरेलले अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले मंगलबारदेखि कार्यभार सम्हालेका हुन् । साढे १६ महिना अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको निजी सचिवालयमा काजमा खटिएका खरेल यही साउन १ गतेदेखि काज फिर्ता भएर राष्ट्र बैंकमा हाजिर भएका थिए । राष्ट्र बैंकको बिराटनगर कार्यालयमा उप निर्देशककोरुपमा कार्यरत खरेल
आईएमएफ प्रतिनिधिमा व्रेउर नियुक्त, गभर्नरसँग भेटेर वित्तीय अवस्था बुझे
बैंकिङ खबर । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का वरिष्ठ आवाशीय प्रतिनिधि एन्ड्रिएस बौर कार्यकाल सकेर फिर्ता भएका छन् । उनको ठाउँमा नेपाल, भारत र भुटान हेर्ने गरी लुइस इ व्रेउर नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त आवासीय प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालसँग शिष्टाचार भेट समेत गरेका छन् । भेटमा बौर पनि सहभागी थिए
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सका अध्यक्षले गरे सपथ ग्रहण
बैंकिङ खबर । प्रोग्रेशिभ फाइनान्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष किशोर कुमार महर्जनले सपथ ग्रहण गरेका छन् । उनले विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्रसमक्ष विधिवत रुपमा सपथ ग्रहण गरेका हुन् । गत असार २९ गते आइतबार सम्पन्न बार्षिक साधारण सभाबाट निर्वाचित ६ जना संचालकहरु मध्येबाट महर्जनलाई अध्यक्ष चयन गरिएको
बैंकिङ खबर । प्रोग्रेशिभ फाइनान्सले २१औँ र २२औँ बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणका साथै सम्पूर्ण अनूसूचीहरु सहितको वित्तीय विवरणहरु छलफल पश्चात पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७५।७६का निम्ति बाह्य लेखापरीक्षकका रुपमा एस.एम.सी एशोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्लाई नियुक्ति
सनराइज बैंकको सिईओमा जनक शर्मा नियुक्त
बैंकिङ खबर । सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पदमा जनक शर्मा पौड्याल नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले पौड्याललाई प्रमुख कार्यकारी पदमा सर्वसम्मतीमा नियुक्त गरेको हो । पौड्यालले ६ महिना अगाडि ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट राजिनामा दिएका थिए । यसअघि सनराइज बैंकको संचालक समितिको बैठकले निरज श्रेष्ठलाई सिइओ पदमा नियुक्त
विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशकमा अंशुला कान्त नियूक्त
बैंकिङ खबर । विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशकमा अंशुला कान्त नियूक्त भएकी छिन् । उनी भारतकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी बैंक स्टेट बैंक अफ इण्डिया एसबिआइ की प्रबन्ध निर्देशक हुन् । विश्व बैंकले कान्तलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको जनाएको छ ।
बेष्ट फाइनान्सका अध्यक्ष अमीर प्रधानको शपथ ग्रहण
सुस्मिता नेपाल , बैंकिङ खबर । काठमाण्डौको कमलादीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बेष्ट फाइनान्स कम्पनीको अध्यक्षमा चयन भएका अमीर ध्वज प्रधानले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका का.मु.कार्यकारी निर्देशक बम बहादुर मिश्रले अध्यक्षमा चयन भएका अमीर ध्वज प्रधानलाई शपथ ग्रहण
मर्जर पश्चात ग्लोबल आईएमई बैंकको सिइओमा परशुराम कुँवर
बैंकिङ खबर । राष्ट्र बैंकको बिग मर्जर नीतिले आगामी दिनमा जनता बैंक नेपाल नरहने भएको छ । ग्लोबल आइएमइ बैंकसंग मर्जरको सम्झौता गरेको जनता बैंकको नाम मर्जर पश्चात मेदिने भएको हो । आधा दर्जन बढि बैंक तथा वित्तीय संस्थलाई गाभेको ग्लोबल आइएमइ बैंकले जनता बैंकलाई गाभ्नका लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा साङ्ग्रिला होटलमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको अध्यक्षमा नरेश शाक्य चयन
बैंकिङ खबर । नेपाल क्लियरिङ हाउस सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नरेश शाक्य चयन भएका छन् । शाक्य नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ अफिसमा कार्यकारी निर्देशक छन् । त्यस्तै, समितिले स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजिज्की निर्देशक कुशुम लामालाई निर्देशकको रुपमा नियुक्त गरेको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरु स्थापना गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज् लिमिटेडले
बैंकिङ खबर । नेपाल बैंक लिमिटेडले आफ्नो १ सय ६३ औं शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको मुर्गियामा उक्त शाखा पुनस्थापित गरि संचालनमा ल्याएको हो । सो शाखा कार्यालय सोहि नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्र बहादुर कार्की र बैक का.मु.सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारीले संयुक्त रुपमा शुभारम्भ गरेका हुन् ।